Waxaan ku soo waddo dheer marka ay timaado kaydinta music. In 1990 ee, mid ka mid ah nooca caanka ah ee qaabab file kaydinta music ahaa MIDI oo aad weli u arkaan MIDI mararka qaarkood, oo ah qaab ringtones telefoonada aad.
MIDI, oo waxay u taagan tahay Musical Qalabka Digital interface, waa qaabka farsamo ee music . Waa mid ka mid ah qaabab ugu heer hoose ah ee dunida ka mid ah warbaahinta digital ahaa. Waxaa loo oggol yahay noocyo kala duwan oo qalab digital ay ku soo bandhigaan shidmay qaab digital ah MIDI. Technology Tani waxaa lagu jaangooyay 1983 by koox ka mid ah wakiilada shirkadaha music iyo camira MMA (MIDI-saareyaasha ayaa Association). Waxaa qaadeen faa'iido weyn isla waqtigaasi sababtoo song dhan ahaa suntan la isticmaalayo oo kaliya dhowr boqol oo khadadka iyo kilobayt yar. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo markii ugu files MIDI laga badiyay ammaanta sida technology cusub waxaad fartaan Wannaagga qaab cusub oo dheeraad ah oo caan ah ay sabab tayada fiican ee dhawaaqa.
Maxaad VLC ma ciyaari MIDI?
VLC la og yahay in ay taageeraan qaabab badan oo maanta laga heli karaa, laakiin bartey ayaa iska fududaysto MIDI files, taas oo uu halkaas joogay tobanaan sano. Dad badan ayaa la yaabay sababta ay sidaas tahay. Weli waxaan arki files MIDI halkan iyo halkaas, u files music yar iyo cajalado oo xataa qaabab file warbaahinta fiican si badan, ay ka mid yihiin qayb ka ah xirmada codec in VLC ah.
Ma jirto sabab gaar ah oo ka VLC laakiin khubarada badan ayaa aaminsan in ay tahay in la sameeyo nooca heer hoose ah MIDI. Marka ciyaaro files MIDI, VLC u baahan sf2 (SoundFont) files maxaa yeelay, in files MIDI kuma jiraan music iniinahoodu ku dhex jiraan. Files MIDI kaliya waxaa ka mid ah mugga, laxanka, garoonka, xawaare, beegyada uu signal gacanta ah iyo qaar badan. SoundFont Tan waxaa ku jira ku dhawaad ​​haysta alaabtii muusikada dhabta ah sida wavetable ka soundcards jir. Sf2 Tani waxay noqon kartaa dhowr GBS, taas oo noqon doonta dhibaato wayn oo ah maaraynta files warbaahinta. Tan ugu muhiimsan waa aasaasi oo keliya ku filan in aan ka mid codec ee ciyaaryahan warbaahinta.
Dad badan ayaa isku dayay in uu ka heli plugins ama software xisbiga saddexaad, kaas oo ogolaan karin loo maqli MIDI, laakiin wax walba oo uu yahay oo kaliya been la, oo aan waxba lagu guulaystay la og yahay.
Ugu wanaagsan ee VLC Kaaliyaha
Waxaad weli doonayaa isticmaali VLC inuu u ciyaaro file MIDI naga markaas waxa ay noqon lahayd fikrad fiican u rogo qaab ay taageerayaan ka dibna u ciyaaro VLC ah. Wondershare Video Converter Ultimate waa mid ka mid ah Converter ah video ugu awooda badan oo wax ku ool ah ee suuqa. Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab maanta la heli karo iyo horumarinta sii software updated la qaabab cusub.
Software Tani waxay noqon doontaa Ololaha Nolol haddii aad rabto in aad ka ciyaari files MIDI on VLC. In kastoo aad doonaa in aan la ciyaaro qaab MIDI, qaabka la gediyay noqon doonaa mid ah oo tayo leh sida Video Convertor Ultimate ma xaqiro ama la bedelo file sinaba.
> Resource > VLC > Sida loo Play buufiyaha Files Audio la VLC?